Fitarainana momba ny fanabeazana: mavesatra ho an’ny sekoly tsy miankina ny hetra | NewsMada
Sampandraharaha mitondra soa ho an’ny vahoaka ny sekoly miahy tena ary mizaka ny satan’ny asa fanabeazana fa tsy natao hitadiavana tombombarotra toy ny orinasa. Maneho ny olana ireo mpiandraikitra manoloana ny hetra takin’ny fanjakana.
Araka ny fepetra ankapobeny mifehy ny hetra, tafiditra amin’ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ampiasaina amin’ity taona ity, tsy maintsy manefa tataon-ketra alaina amin’ny karama (IRSA) amin’ny sandany 10% ny sekoly tsirairay. Ny saram-pianaran’ny mpianatra anefa, tsy azo hakana ampahany hatao hetra ka sahiran-tsaina ny mpitantana sekoly manoloana izany. “Amin’izao fotoana izao, tonga ny mpitaky hetra maka ny hetra tokony ho naloa nanomboka ny taona 2017 raha hanamboatra “carte d’identité fiscale” sy laharan’ny karatra maha mpandoa hetra ny mpiandraikitra ny sekoly tsy miankina”, hoy ny filohan’ny fikambanan’ny sekoly miahy tena Aile (Association des instituts laïques pour l’éducation), Rakotomalala Célin. Mavesatra ho an’ny sekoly izany sora-bola izany, indrindra tsy misy fidiram-bola ankoatra ny saram-pianarana avy amin’ny mpianatra. Nampahatsiahiviny fa nihevitra ny sekoly tsy miankina ho sampandraharaha ilain’ny vahoaka ny fitondrana nifanesy ka ny vola azony no entiny mampihodina ny asany nefa tataovana hetra indray ankehitriny. Ireo mpanabe amin’ny maha olom-pirenena azy, efa mandoa ny IRSA 2 000 Ar isam-batan’olona miasa amin’ny sekoly.
Ankoatra ny hetra, tsy nisitraka tolotra fanampiana ny mpanabe avy amin’ny sekoly miahy tena nandritra ny fihibohana ary mbola nanampy trotraka ny fanafoanana ny fanampiana ny fampihenana ny vola mivoaka amin’ny ray aman-dreny ary ny fanohanana 24 000 Ar ho an’ny mpampianatra miampy ny tosika ho an’ny fikambanan’ny sekoly miahy tena. Nanome toky ny minisitry ny Fanabeazana fa hangataka hamerenana ireo tohana telo ireo raha nitafa tamin’ny solontenan’ny mpiandraikitra ny sekoly tsy miankina.